स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
बढी शल्यक्रिया एपेन्डिसाइटिसको
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा दिनहुँ औसत दुइटा एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया हुने गरेको छ । यद्यपि हाम्रो मुलुकमा दिनहुँ यो शल्यक्रिया कति हुन्छ भन्ने कुनै अध्ययन–अनुसन्धान छैन ।
मद्यपानको सुरक्षित मात्रा हुन्न : अध्ययन
मद्यपान थोरथोरै दिनहुँ गर्दा स्वास्थ्यलाई हानि गर्नुको साटो फाइदै गर्छ भन्ने सुन्दै आउनुभएको होला तपाईंले ।
एउटै वस्तुबाट जोगिँदा दीर्घायु
हालैको एउटा अध्ययनको दाबीअनुसार, यदि तपाईं लामो जीवन पाउन चाहनुहुन्छ भने, खानपानमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रालाई सीमित गर्नुस् ।
जनावरले टोकेका बिरामीलाई ‘एन्टिरेबिज’ सँगै लगाइने ‘इम्युनोग्लोबिन’ सुईको अभाव देखिएको छ । टोकाइ बढी भएको, घाँटीभन्दा माथि तथा हातका औंलामा टोकेको अवस्थामा ‘इम्युनोग्लोबिन’ सुई लगाउनुपर्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
फरक चिकित्सा पद्दतिको समायोजन किन नगर्ने ?
क्लिनिकमा आउने धेरै जसो बिरामीले सोध्ने गर्दछन् । डाक्टर साब, होमियोप्याथिक औषधिको सेवन गर्दा एलोप्याथी औषधि खान मिल्छ कि मिल्दैन? होमियोप्याथिक र एलोप्याथिक औषधिलाई एकसाथ लिन सकिन्छ? एकसाथ लिनले कुनै प्रकारको हानि त हुदैन?
'वायु प्रदुषणले घटाउँछ सिक्ने क्षमता'
लामो समयसम्म अत्याधिक वायु प्रदुषण भएको स्थानमा रहेकाहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा निकै ठूलो क्षति पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिका र चीनले २० हजार चिनियाँ नागरिकमा गरेको चार वर्ष लामो संयुक्त अध्ययनले वायु प्रदुषणलाई झेलेकाहरुको बोल्ने र हिसाब-किताब गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको देखिएको हो ।
तपाईंको दैनिकी कस्तो छ ? बिहान उठ्ने, खाना खाने, कार्यालय जाने अनि बेलुका अबेर घर फर्किएर खाना खाने, सुतिहाल्ने । यदि जीवनशैली यस्तै छ भने तपाईं नजानिँदो ढंगले ढाड, गर्धन र हाडजोर्नी दुख्ने समस्याको सिकार बन्नुहुन्छ ।
ह्याम्समा ओस्टियोपोरोसिस रोगको नि:शुल्क शिविर सम्पन्न
नेपालभर नै बढ्दै गइरहेको जेष्ठ नागरिकहरुको जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै वृद्ध अवस्थामा धेरैमा देखिने ओस्टियोपोरोसिस र हाडजोर्नीको विभिन्न समस्यालाई बेलामा नै पहिचान गरी उपचार गर्नका लागि काठमाडौंको धुम्बराईस्थित ह्याम्स अस्पतालले नि:शुल्क शिविरको आयोजना गरेको छ ।
कतिपय मान्छेलाई उमेरभन्दा बूढो देखिन्छ । यसो हुनुमा गर्मी मौसममा घामबाट छालालाई नबचाउनु मुख्य कारण हुन सक्छ । त्यसैले पनि आफूलाई तन्दुरुस्त र जवान राखिराख्न छालाको स्याहारमा ध्यान दिनुपर्छ ।
आरु रसिलो, गुलियो फल हो । यो स्वाद मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि समेत निकै फाइदाजनक हुन्छ ।आरु खाने गर्दा आँखाको ज्योति, छाला, स्नायु प्रणाली, दाँत, हाडको स्वास्थ्य राम्रो भइरहन्छ ।
अल्छी व्यक्ति दीर्घायु
प्रोसिडिङस अफ द रोयल सोसाइटी जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनले अल्छीहरूको मुहारमा खुसी ल्याइदिएको छ । त्यसअनुसार अल्छी व्यक्तिहरू दीर्घायु हुन्छन् ।
स्टिम बाथ गर्दा मुटु रोगको जोखिम कम
दिनहुँ साउना बाथ (वास्पस्नान) गर्दा शरीरले आराम मात्र पाउँदैन, मुटु रोग र मानसिक विकारको जोखिमसमेत कम हुँदै जान्छ । हालैको एउटा अनुसन्धानमा यस्तै दाबी गरिएको छ ।